Cheshire Cat တစ်ဦး slot ကရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်5နှင့်အတူ reels 40 paylines. အဆိုပါလူကြိုက်များဝတ္ထု Wonderland ထဲမှာအဲလစ်ကဒ်အထိုင်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်. ကဒ်အထိုင်၏ setup ကိုတစ်သစ်တောနှင့်တေးသံတစ်ဦးပွော့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်ဒီအံ့သြဖွယ်မှော်စွန့်စားမှုအတွက်လက်ရှိထိပ်တန်းနှင့်များစွာသောဆုကြေးငွေ features တွေဂိမ်းကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရိုးရိုးလေးများမှာ. ဒီဂိမ်းလည်းကစားနိုင်ပါတယ် ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ slot နှစ်ခု.
ဒီရိုးရှင်းတဲ့ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ slot နှစ်ခုအတွက်ငါးရိုးရှင်းသော Paylines
အဆိုပါ slot ကမှ 40p တက်ကနေကွဲပြားတဲ့လောင်းကစားအကွာအဝေးရှိပါတယ် လှည့်ဖျားနှုန်း£ 400. အဆိုပါ reels အပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသောအဆိုပါသင်္ကေတများအဲလစ်တို့ပါဝင်သည်, မတ်လ Hare, ထို့အပြင်ကစားကတ်များနှင့်အတူ Caterpillar တို့နှင့် Cheshire Cat- J ကို, K သည်, A နှင့်မေး, ကိတ်မုန့်ချပ်, နှင့်မှော်ဆေး.
အဆိုပါ slot ကပေးသည် 12.5 အဆသင်ဆင်းသက်လျှင်ရှယ်ယာ5တစ်ခုတည်း payline အပေါ်သင်္ကေတများ. အဆိုပါစူပါ stack အင်္ဂါရပ်ကစားသမားအမှန်တကယ်အများကြီးအကြိုးပွုနိုငျရာကနေအင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒီ feature ထဲမှာ, တိုင်းလှည့်ဖျားပေါ်မှာစူပါ stack သင်္ကေတသို့လှည့်မှသကဲ့သို့တဦးတည်းရဲ့သင်္ကေတကျပန်းရွေးချယ်တော်မူလိမ့်မည်.
အနည်းဆုံးသုံးဘီးဆုကြေးငွေသင်္ကေတဟာ reels ပေါ်သို့ဆင်းသက်သည့်အခါဖြစ်ပေါ်ရရှိသည့်အခမဲ့လှည့်ဖျားအပိုဆု Feature ကိုအမည်ရှိဆုကြေးငွေအင်္ဂါရပ်ရှိပါသည်.3သူတို့ကိုသင်ငါးခုအခမဲ့လှည့်ခြင်းများပေးအပ်ပါလိမ့်မယ်,4သူတို့ကိုသင်တစ်ဆယ်အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးလည်းဆယ်ဆစုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာပေးအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျရရန်လုံလောက်သောကံကောင်းလိမ့်ထွက်လှည့်ခဲ့လျှင်5သူတို့ထဲက, သငျသညျငွေသားဆုရကျိုးနပ်နှင့်အတူနှစ်ဆယ်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများကိုချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် 50 ကြိမ်စုစုပေါင်းအလောင်းအစား.
ဒီ feature ကနဦးခင်မှာ, အဆိုပါ reels အပေါ်ဆုလွင်ပြင်ကျပန်းရွေးချယ်တော်မူသည်ဟုပေးသောအခမဲ့လှည့်ခြင်းများရဲ့အစမပြုမီကစားသောဘီးအင်္ဂါရပ်ရှိ. သင်တို့သည်လည်းရနိုင်4အလွန်အမင်းပေးဆောင်ခံရဖို့ထွက်လှည့်နိုင်မရိုင်း reels.
နိမ့်ဆုံးအနိုင်ရရှိတန်ဖိုးရှိသေချာတဲ့အပိုဆုအာမခံအင်္ဂါရပ်ရှိပါသည် 10 ဆရှယ်ယာ. သငျသညျလျော့နည်းအနိုင်ရလိုလျှင်, အဆိုပါအနိုင်ရတက်ပဲရှိတယ်ရလိမ့်မယ်. ကြီးမားသောအနိုင်ရဖို့အတွက် key ကိုအခမဲ့လှည့်ဖျားအပိုဆု Feature ကိုအတွက်ရိုင်း reels အပေါ်မျက်စိစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
ကှဲလှဲအနိမ့်ရာမှလတ်အထိနှင့်အတူ, ကဒ်အထိုင်ဂိမ်းမိုဘိုင်းကနေအပေါငျးတို့သ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ်, တက်ဘလက်နှင့် Desktop ပေါ်မှာ devices များ. ကောင်းစွာ, အ ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ slot နှစ်ခု ဒီဂိမ်းလည်းရှိ. အကောင်းတစ်ဦး orchestral လမ်းကြောင်းကိုလည်းနောက်ခံကစားနေစဉ်တော်တော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ကာတွန်းဒီဇိုင်းကစားသမားများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. ယနေ့သူ့ဟာသူကဒ်အထိုင်များ reels အပေါ် hit ဖုန်းကိုလောင်းကစားရုံ slot နှစ်ခု သို့မဟုတ်မရရှိနိုင်ပါနှင့် Cheshire Cat အခြား devices သင်တို့အဘို့အချိုသောအံ့သြဖွယ်ဆောင်ခဲ့ရမည်အကြောင်း.
ဇါတ်ရုံ 2017 ဗြိတိန်နိုင်ငံ | Play Free £5 | Coinfalls ကာစီနို